Cnaps: olona very asa 849 nahavita fiofanana | NewsMada
Miisa 849 ireo mpiofana nomen’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (CNaPS) mari-piofanana, omaly. Olona very asa izy ireo, satria voatery natsahatry ny mpampiasa vokatry ny tranga Covid-19.
Nandray andraikitra ny CNaPS, miaraka amin’ny mpiara-miombon’antoka samihafa (CCIFM, INPF, MPE, CDA, Eccova, Ipac), hamerina ireo mpiasa very asa eo amin’ny sehatry ny asa indray. Nitotaly 849 ny mpiofana, nanomboka ny fiandohan’ny taona 2021.
Nizara andiany roa ny fiofanana. Voalohy, nofantarina ny traikefa ananan’ny tsirairay, nampianarina ny fomba fandrafetana taratasy CV sy ny fomba hiatrehana ny fanontaniana rehefa hitady asa. Famantarana ny seha-pihariana hatao aorian’ny fiofanana. Faharoa, miompana amin’ny tena fiofanana arakaraka ny lalam-pihariana nosafidin’ny tsirairay. Misy ny fampianarana teny vahiny frantsay sy/na anglisy, ny informatika, ny asa birao (secrétariat), sns. Eo koa ny asa tena, toy ny fanaovana mofomamy, ny lakozia, ny zaitra sy ny fikirakirana ny milina fanjairana indostrialy, ny fanamboarana fiarakodia, ary hisy koa ny familiana fiarakodia.
2.000 isaky ny telo volana ireo very asa
Nilaza ny talen’ny Tosika sy ny fanentanana ara-tsosialy CNaPS, Rakotomalala Yvan, fa nahita asa vaovao ny 40%-n’ireo efa nomena fiofanana toy izao. Manentana ny hafa izy ireo, hanatona ny CNaPS, satria manodidina ny 2.000 isaky ny telo volana ny olona very asa amin’izao krizy Covid-19 izao. Efa maherin’ny 200 ireo nanao fangatahana fiofanana indray. Midika ireo fa mbola maro ny orinasa tsy miverina amin’ny laoniny sady sahirana ka voatery manala mpiasa.